ခိယောမိဇုကျောင်းတော် - ဝီကီပီးဒီးယား
၁-၂၉၄၊ ဟိဂရှိယာမရပ်ကွက်၊ ကျိုတို၊ ကျိုတိုစီရင်စုနယ်
ဆခနိုအုအဲနို တမုရမရို (တိုခုဂဝအိအဲမိဆု ပြန်လည်ပြင်ဆင်)
ခိယောမိဇုကျောင်းတော် (清水寺, ခိယောမိဇုဒဲရ)သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့အရှေ့ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည့် ကျောင်းတော်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယခင်က ဤကျောင်းတော်ကို အိုတိုဝဆန်းခိယောမိဇုကျောင်းတော် (音羽山清水寺) ဟု သိကြသည်။ ဤကျောင်းတော်သည် ယူနက်စကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်နေရာဖြစ်သည့် တိုကျိုရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်အဆောက်အဦး (ကျိုတို၊ အုဂျိနှင့် အိုဆုမြို့များ)တွင် ပါဝင်သည်။
ခိယောမိဇုအမည်ဖြင့် ရှိမနဲစီရင်စု၊ ယစုဂိမြို့တွင် နောက်ထပ်ကျောင်းတော်တစ်ခု ရှိသေးသည်။ ထိုကျောင်းတော်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းရှိ Chūgoku 33 Kannon Pilgrimage ၏ ကျောင်းတော် ၃၃ ခုတွင် ပါဝင်သည်။ ဤကျောင်းတော်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်း နိချိရန်း (Nichiren) နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
ခိယောမိဇုကျောင်းတော်သည် လက်ရှိအချိန်တွင် တစ်ပိုင်းတစ်စဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်ရသည့် ငြမ်းစင်များဖြင့် ကာရံထားသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အိုလံပစ်အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
ခိယောမိဇုကျောင်းတော်ကို ဟဲအိအန်ခေတ် (Heian) က ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ၇၇၈ ခုနှစ်တွင် ဆခနိုအုအဲနိုတမုရမရို (Sakanoue no Tamuramaro) က ကျောင်းတော်ကို ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိန် မြင်ရသည့် ကျောင်းတော်သည် တိုခုဂဝအိအဲမိဆု (Tokugawa Iemitsu) ၏ လမ်းညွှန်မိန့်ကြားမှုဖြင့် ၁၆၃၃ ခုနှစ်က ပြင်ဆင်ခဲ့သည့် ပုံစံ ဖြစ်သည်။ ကျောင်းတော်တစ်ခုလုံးကို တည်ဆောက်ရာတွင် သံကို အသုံးပြုထားမှု လုံးဝမရှိပေ။ ကျောင်းတော်၏ အမည်သည် အနီးအနားရှိ ရေတံခွန်၏ အမည်ကို စွဲ၍ ခေါ်ဝေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ခိယောမိဇုဆိုသည်မှာ “သန့်ရှင်းသည့်ရေ” သို့မဟုတ် “စင်ကြယ်သည့်ရေ” ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။
ဤကျောင်းတော်သည် နာရခေတ် (Nara) ကာလက လွှမ်းမိုးမှုရှိသည့် ဟော့ဆိုး (Hossō) နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည်။
ကျောင်းတော်၏ အဓိကခန်းမတွင် ကြီးမားသည့် ဝရန်တာတစ်ခု ရှိပြီး ရှည်လျားသည့် တိုင်များဖြင့် ထောက်ပံ့ထားသည်။ ထိုဝရံထာမှနေ၍ မြို့၏ လှပသည့် မြင်ကွင်းများနှင့် တောင်ကုန်းတောင်တန်းများကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်သည်။ ဝရံတာများနှင့် အဓိကခန်းမများသည် အဲဒိခေတ်ကာအတွင်း တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ဘုရားဖူးသူ များစွာဝင်ဆံ့သည်။
ကျောင်းတော်တွင် “ခိယောမိဇု၌ ခုန်ဆင်းခြင်း” ဟူသည့် ဖော်ပြသည့် စကားရပ်သည် ထင်ရှားသည်။ ၎င်းသည် အဲဒိုခေတ်ကာလ အလေ့အကျင့်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ၁၃ မီတာ (၄၃ ပေ) အမြင့်ရှိသည့် ခုံမှ ခုန်ချရခြ်ငး ဖြစ်သည်။ အဲဒိုခေတ်ကာလက ထိုကဲ့သို့ ခုန်ချမှုများ ၂၃၄ ကြိမ် ရှိခဲ့ပြီး ၈၅.၄ ရာခိုင်နှုန်းသည် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ အလေ့အကျင့်ကို ၁၈၇၂ ခုနှစ်တွင် တားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ The practice was prohibited in 1872.
အဆောက်အဦးအဓိကခန်းမ၏ အောက်ခြေတွင် အိုတဝရေတံခွန် တည်ရှိသည်။ ရေတံခွန်မှ ရေလမ်းကြောင်း သုံးခုသည် ကန်တစ်ခုအတွင်း စီးဝင်နေသည်။ လေ့လာသူများသည် ရေကိုရယူသောက်သုံးနိုင်ပြီး ထိုရေကိုသောက်သုံးပါက ဆန္ဒများပြည့်ဝသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
ကျောင်းတော်ပရဝုဏ်နေရာတွင် အခြားများစွာသော ဗိမာန်ကျောင်းတော်များစွာ ပါဝင်သည်။ ထိုအများထဲမှ ဂျိရှုဗိမာန်ကျောင်းတော် (Jishu) ကျောင်းတော် အိုးခုနိနုရှိ (Ōkuninushi) အချစ်နတ်ဘုရားကို ရည်စူးထားသည့် နတ်ကွန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဤဗိမာန်တွင် ၁၀ မီတာ (၃၀ ပေ) ရှိသည့် ကျောက်တုံးများစီထားသည့် လမ်းရှိပြီး ထိုလမ်းကို လေ့လာသူများက အဆုံးထိတိုင်အောင်မျက်စိမှိတ်လမ်းလျှောက်ကာ ကြိုးစားလျှောက်ကြသည်။ အဆုံးထိတိုင် အောင်မြင်အောင် လျှောက်နိုင်သူသည် အချစ်စစ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ 
ကျောင်းတော်တွင် အဆောင်များ၊ အမွှေးတိုင်များနှင့် အိုမိခုဂျိ (ကံကြမ္မာစာရွက်) များကို ရရှိနိုင်သည်။ ကျောင်းတော်သည် ပွဲတော်များဖြင့် ထင်ရှားသည့် နေရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ နွေရာသီကာလ အိုဘွန်းပွဲတော်နှင့် နှစ်သစ်ကူးအချိန်များတွင် အထူးသဖြင့် ထင်ရှားသည်။ မြေပြင်တွင် နေရာများတည်ဆောက်ကာ ရိုးကာအားလပ်ရက်စားစရာများနှင့် အမှတ်တရလက်ဆောင်များ ရောင်းချခြင်းများလည်း ရှိသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ခိယောမိဇုကျောင်းတော်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အံ့ဩဖွယ်နေရာသစ် ၇ ခု၏ နောက်ဆုံးပိတ် ၂၁ ခုစာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် အရွေးချယ်ခံရသည့် နေရာ ၇ ခုစာရင်းတွင်မူ မပါဝင်ခဲ့ပေ။
ဆောင်းဦးရာသီတွင် မြင်ရသည့် ခိယောမိဇုကျောင်းတော်
ဆောင်းရာသီတွင် မြင်ရသည့် ခိယောမိဇုကျောင်းတော်
ဆောင်းဦးရာသီတွင် မြင်ရသည့် ဘုရား
ဘုရား၏ အနောက်ဘက်နှင့် အနီးနားရှိ အဆောက်အဦ မြင်ကွင်း
Ksitigarbha (or Jizō) en masse ရုပ်တုများ
Wikimedia Commons တွင် ခိယောမိဇုကျောင်းတော် နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
Information and Photograph Archived9June 2019 at the Wayback Machine. (in အင်္ဂလိပ်)
Kiyomizu-dera Temple home page (in ဂျပန်)
↑ ၃.၀ ၃.၁ Kiyomizu Temple (2007-04-07)။3April 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ Kiyomizudera, Kyoto။
↑ Kiyomizu-dera Temple။ 10 December 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Finalists for The Official New7Wonders of the World။ 1 June 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ခိယောမိဇုကျောင်းတော်&oldid=718321" မှ ရယူရန်